Guushii Caga-caddaanta, Orodyahan isagoo Kabtii ka maqantahay ku Guuleystay Kaalinta 1-aad!!!
Monday, May 20th, 2019 - 13:47:37
Saturday September 01, 2018 - 09:33:44 in Wararka by Muuse Cabdi
Orodyahanka reer Kenya Conseslus Kipruto ayaa difaacday guusha, isagoo Kabtiisa Bidixdu ka maqantahay wuxuuna ku guuleystay Billadda hore ee 3,000m Ciyaaraha IAAF Diamond League ee ka dhacay Zurich, Switzerland.
Wuxuu difaacday guushaan, iyadoo ay duushay kabtii ugu xirneyd Lugta Bidix wuxuuna goostay in uusan istaagin xataa haddii uu Caga Cadyahay.
"Wey u muuqan kartaa waalli. Balse aniga aad ayey ii dhiirri gelisay waayo waxaan u dagaallamay si xooggan tartankiina wuxuu ku dhammaaday si wanaagsan," ayuu yiri keddib guusha.
Kiprutowaa laacibka ku guuleystay ciyaaraha Olympic-da iyo World steeplechase.
Wuxuu kasoo baxay oo ka badiyay Morocco ninka kasoo jeeda ee Soufiane El Bakkali kaasoo booska labaad uun uga dhammeystay tartanka.
"Waan dhaawacmay, waayo waxaan waayay mid ka mid ah Kabaheygii," ayuu yiri keddib dhammaadkii ciyaarta.
Wuxuu sidoo kale twitter kusoo qoray intaas keddib: "Aad ayey u adkeyd una Xanuun badneyd in aan ordo iyadoo 1 kab iga maqantahay, balse waxaan ahaa mid aad u xamaasadeysan waxaanna isu sheegay in aanan is dhiibin, Taageerayaashu aadbey iila yaabeen anna waxaan isku deyay in aan is ilaaliyo tan iyo Guusha."
Tartanka keddib, laacibka Kenya wuxuu ka baxay garoonka isagoo lulaya Calanka dalkiisa, hortoodana socda taageerayaasha Zurich.
Kenyan-ka Warbaahinta Bulshada kusoo hadlay waxaa ka mid ah, Madaxweyne ku xigeenka dalkaas William Ruto, waxayna ku ammaaneen Kipruto Cagtiisii Caddeyd ee lama filaanka dhigtay:
Tani ma aysan aheyn markii ugu horreysay ee Orodyahan uu Kabtiisa waayo haddana uu ku guuleysto Billadda ugu Sarreysa.
Sanadkii 2011, Orodyahanka reer Itoobiya Dejen Gebremeskel ayaa hantiyay Tartanka Ragga ee 3,000m ciyaarihii Boston Indoor Games, keddib markii uu kabtiisa waayay Wareeggii hore. Wuxuuna garaacay Orodyahanka reer Britain ee Mo Farah.
Sanadki 2015, Orodyahanka reer Kenya Eliud Kipchoge ayaa ku guuleystay ciyaarihii Maaratoonka ee Berlin isagoo waayay mid ka mid ah Kabihiisa.